Yega yekufriira yemhepo, China Imwe isinganetsi firiji Mahofisi, Vatengesi, fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Iyo yakaderera-yekushungurudzika mweya yechando pamwe chete nedhiramu imwe inogadzirwa neTekinoroji ino shanda kune wega inokurumidza kupisa yechando yakaomeswa uye zvidiki-zvidimbu zvechikafu. Nekudaro, iwo mahombekombe akakura ekuzevha ayo anoshandawo kune wega akakurumidza akaomeswa echando akakura-siki yechando chikafu chakadai sekudya kwakagadzirirwa, huku dzese, hove dzese uye zvichingodaro. Iyo kureba kweinoderedzwa uye yakaderedzwa chinzvimbo chinoshandurwa mune yakadzika-tension spiral freezer kuti ifananidze mitsara yekugadzira yevatengi isati yasvika uye shure, uye inogona zvakare kupihwa neakafananidzirwa madhiraivha.
● Iyo firiji inotenderera yakashongedzwa nehunyanzvi hwekushambidzika hwehutsanana, ichishandisa nzira yazvino yemvura yekupa, izvo zvinoita kuti kupisa kwekuchinjana kupisa kuve pamusoro pe20% kukwira kupfuura mafiriji echinyakare.
●Iyo firiji yemweya inoshandisa yakaenzana uye yakatetepa yakatenderera dhizaini dhizaini dhizaini iyo inowedzera kupisa kupisa.
●Isu tinoshongedza neyekudya-giredhi isina simbi mesh bhandi uye epurasitiki modular bhandi nefiriji inonaya zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvezvinhu zvakasiyana.
●Iyo firiji yemweya inoshongedzwa nehungwaru yepakati yekudzora system, otomatiki kuona uye aramu mwenje chishandiso, chiri nyore kune vashandisi kuti vashande nekuchengetedza.
2 kusvika makumi mana ematanho
· Yakavharirwa yakavharirwa ne125mm / 150mm gobvu polyurethane madziro, mukati mwenje, isina simbi ganda. Fully welded yakakomberedzwa sarudzo.
Chikafu chegiredhi SS mesh bhandi kana modular bhandi repurasitiki
520 kusvika 1372 mm
500 kuna 4000 mm
Yemunharaunda nyika voltage
Dhizaina remadziro yakakomberedzwa
Stainless simbi control panel
PLC kutonga, kubata-skrini, chengetedzo sensors
Freon, Amoniya, CO2
Stainless simbialumalumum machubhu, aruminiyamu zenze, shanduka zenze mapango, marefu kukanda mafeni
-40℃ kusvika -45 ℃
4 kusvika ku200 min kushambadzazvinonzwisisika
Zviri nyore / Zvichengetedzwa Zvigadzirwa
Ice Cream Zvigadzirwa
Zvibereko & Vezvirimwa Zvigadzirwa